ညိမ်းပြည့်စုံ| December 5, 2012 | Hits:1
| | အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားမလာခင်က ကိုအာကာ ရေးဆွဲခဲ့သည့် ဂရပ်ဖတီ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
zaw December 5, 2012 - 11:52 pm Dear friends,
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 6, 2012 - 3:31 am ပြည်သူပိုင်တဲ့ နေရာ၊ အများပြည်သူ ပိုင်တဲ့ နေရာ၊ အစိုးရ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေ မဆွဲရဘူးဆိုတာ ပြည်ပ နိုင်ငံ အတော်များများမှာလဲ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ပြည်ပက အလည်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ သူတို့ နေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လုပ်မရလို့ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်အလည်လာတုန်း အခွင့်ယူ လုပ်တာပေါ့။ graffitti အချို့က လှလှပပ ကြည့်ကောင်းပေမယ့် တချို့က ကိုယ့်ဘာသာ သာ အထင်ကြီးနေတာ၊ ကြည့်လို့မလှတော့ မြို့ ရှုခင်း အရုပ်ဆိုးတာပေါ့။ စည်ပင်သာယာကို ဆွဲဘို့ နေရာ မသတ်မှတ်ခိုင်းနဲ့လေ။ ကိုယ့်မိဘပိုင်၊ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ အိမ် နံရံတွေ၊ ခြံခတ်တံတိုင်းတွေမှာ အတွင်းကရော၊ အပြင်ကရော၊ ပတ်ပတ်လည် လှည့်ဆွဲကြလေ။ နောက်ပြီး graffitti ဆိုတာ ညကျမှ ဆွဲရတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ မသိပဲ ပြောနေကြတယ် ထင်တယ်။ အဲဒါ အနောက်တိုင်းက ကျီးမနိုးပွဲ တမျိုးပဲ။ သူများပိုင်တဲ့ နံရံမှာ ပိုင်ရှင်မသိအောင်၊ ပိုင်ရှင် မကြိုက်မှန်းသိလျက်နဲ့ လာဆွဲရတာမို့ ပိုင်ရှင် မသိအောင် ညဘက် လာခိုးဆွဲတာ။ တကယ်တော့ graffitti artist ဆိုတာ ငတက်ဖြား ပန်းချီဆရာကို ပြောတာ။ သိပ် ဂုဏ်ယူမနေကြနဲ့။ မြင်းစီးပြီး အထီးလား အမလား သိအောင် နည်းနည်း လေ့လာကြဦး။ နိုင်ငံခြားက လုပ်တယ်ဆိုတိုင်း လိုက်အတုခိုးနေလိုက်ကြတာ ဘာမှန်းမသိ၊ ညာမှန်း မသိနဲ့။
Reply alice December 7, 2012 - 2:10 pm တော်ာတော်သိနေတယ်ပေါ့ graffiti ဆိုတာဘာလဲလို့။
Reply K.J December 6, 2012 - 9:20 am စည်းကမ်းမဲ့တဲ့သူတွေအတွက် စည်းကမ်းဆိုတာ ဖြစ်လာရတာပါ။ စည်းကမ်းရှိရှိ နေတဲ့သူတွေပါ သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိခိုက်စေကုန်တာပေါ့။ ရှဉ့်လည်း လျှောက်သာ ပျားလည်း စွဲသာ ဖြစ်အောင် နေရာတခု သတ်မှတ်ပေးပြီး အဲဒီနေရာမှာပဲ အနုပညာကို ပုံဖော်ခွင့် ပေးနိုင်မယ် ဆိုရင် သင့်တော်ပါမယ်။ ကျန်တဲ့နေရာ အိမ်နံရံတွေ၊ ကျောင်းနံရံတွေ၊ ဆိုင်တံခါးတွေ မှန်တွေ၊ ခြံဝန်းအုတ်နံရံမှာ ပုံဆွဲတဲ့သူတွေကိုတော့ ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးသင့်ပါတယ်။
Reply Mr Naing December 6, 2012 - 10:15 am You can draw as much as you can on the wall of you home.
Reply Min Hthet Ther December 6, 2012 - 9:40 pm Dear dirty painters,
Reply Aung Khin December 7, 2012 - 11:21 pm I like that art. It is good for youth
Reply saw December 9, 2012 - 7:20 am That is Vandalism. Outlaw painters must be punished by any laws. People of Myanmar cooperates to arrest those Ghetto who thought they are implementing freedom arts. No they are insulting democracy. Disgraceful paintings.